सगुनमा एकैपटकमा थपियो अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कम्पनीको ५० करोड लगानी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सगुनमा एकैपटकमा थपियो अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कम्पनीको ५० करोड लगानी
वासिङ्टन डिसी। उदाउँदो सामाजिक संजाल सगुनमा एकैपटक ५० करोड लगानी थपिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मिडिया कम्पनीले सगुनमा एकैपटकमा ५० करोड लगानी गरेको हो । एचटी ओभरसीज प्रा.लि.ले सगुनमा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने आज घोषणा गरेको हो ।
स्मरणीय छ एचटी ओभरसीज प्रा.लि. सिंगापुर एचटी मिडिया लिमिटेड मातहतको कम्पनी हो जसले भारतको सबैभन्दा पुरानो र चर्चित मिडिया 'हिन्दुस्तान टाइम्स' संचालन गरिरहेको छ । एचटी ओभरसीजले सगुनमा लगानीसँगै आफ्ना चर्चित मिडियामार्फत सगुनको विश्वव्यापी प्रबर्द्धनसमेत गर्नेछ । यसको लागि उसले हिन्दुस्तान टाइम्स र यसको मातहतमा संचालित सबै संचारमाध्यमलाई उपयोग गर्ने सम्झौता भएको छ ।
सगुनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी गोविन्द गिरीले यो सम्झौताले आफूहरु निकै उत्साहित भएको बताए । ‘यो सम्झौताले हामीलाई ठूलो संख्यामा भारतीय प्रयोगकर्तासँग जोड्नेछ, जो संसारमै दोस्रो ठूलो इन्टरनेट बजार हो’ उनले भने । जनवरीमा सगुनको मोवाइल एप लञ्च भएको प्रतिफलस्वरुप यति ठूलो सम्झौता भएको सगुन टिमले जनाएको छ । अहिले सगुनका १६ लाख प्रयोगकर्ता छन् र सगुनले २ अर्ब ८० करोड सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तालाई उत्कृष्ट सामाजिक संजालको रुपमा सेवा दिने लक्ष्य लिएको छ ।
‘हाम्रो लगानीले सामाजिक संजालको क्षेत्रमा सगुन कतिसम्म उत्कृष्ट छ भन्ने प्रस्ट पार्छ’ हिन्दूस्तान टाइम्सका इक्विटी टिमका प्रमुख अतिभ चड्डाले भने ‘हामी प्रयोगकर्ताले सगुनबाट उत्कृष्ट सामाजिक संजालको अनुभव प्राप्त गर्नेछन् । हामी यो सहकार्यबाट निकै उत्साहित छौं ।’